nooca New dhagaxa moon helay by Lander Labiyo Chinese - Rule News
nooca New dhagaxa moon helay by Lander Labiyo Chinese
Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “nooca New dhagaxa moon helay by Lander Labiyo Chinese” waxaa qoray Tim Radford, waayo theguardian.com on 22-Tuesday December 2015 16.04 UTC
saynisyahano Chinese ayaa la aqoonsaday nooca cusub dhagaxa ku dayaxa. An Lander Labiyo Chinese saarnayn, bilaabey 2013, sahamisay socodka qadiimi ah dhagax dab Kobenhagen iyo Halabuurka macdanta aqoonsaday oo gebi ahaanba ka duwan wax laga soo ururiyey by the American cir u dhexeeya 1969 iyo 1972, ama by Lander la soo dhaafay Soviet in 1976.
warka, diray ka bohol saameyn ku Imbrium Mare ah, waa waanada kale oo shidaal Planetary mar dambe waxay dhawraan of Russia yahay, Americans ama Agency Space Yurub: Japan, India iyo China ayaa dhamaantood bilaabay orbiters Labiyo on gantaallo iyaga u gaar ah. Britain bilaabay ay satellite gaar ah, Prospero, ay gantaal u gaar ah, Black Arrow, ka ay goobta soo bandhigista u gaar ah in Woomera, Australia, in 1971 kadibna ay ka baxeen tartanka ka bannaan ee.
Related: Marka dadka ku laaban doonaa Dayaxa? podcast
Tan iyo dhamaadka barnaamijka Apollo ah, saynisyahano Maraykanka ayaa inta badan la sameeyay ay cilmi Labiyo ka orbiters. Chang'e-3, mission Shiinaha ee saarnayn Labiyo, soo dejiyey rover ah oo lagu magacaabo Yutu ama "Jade Bakayle" on socodka ah dhagax dab eego da'da yar. rover Tani ku daray in la ogaado wax qarsoon mineralogical ku dayaxa, basalt leh "Sifooyinka compositional gaar ah."
daraasadda, sheegay in Nature Communications, ayaa la filayaa inuu kor u akhrinayaa ka alaabtii satellite, iyo inay ku tuuraan iftiin cusub oo ku saabsan asalka ah deriskiisa ugu dhow dhulka.
moon ayaa la rumeysan yahay in ay la aasaasay markii shay Mars yimaa-burburtay meeraha Earth hore ee taariikhda nidaamka qoraxda. qashin ka dhaca ay iskugu yimaadaan iyo qaboojiyaa, laakiin xubno ka shucaaca qoto dheer ee gudaha kor u kululayn dhagaxa qolof ah hooseba, iyo 500 milyan oo sano ka dib, dhagax dab Kobenhagen slurped galay craters saameyn ku dayaxa si ay u sameeyaan waxa loogu yeero "badaha" ama Maria.
alaabtii waxay rover ee Yutu bilaabay baadhaya dhagax dab in ay u badan tahay biyaa ku saabsan 3 billion sano ka hor. Waxa ay heleen haysan maayo muwaadiniinta caadiga ah ballaaran soo jeedaan habeenkii, laakiin waa la yaab leh, waayo, saynisyahano Planetary. Geochemists dib kartaa taariikhda socodka dhagaxa weyn ee ka isku dhafka ah telltale of minerals in dhagax dab ah la qaboojiyey. Basalts raystay by guutadii cir ama ururiyey by a baaritaan Soviet Luna u muuqdaan in lagu kala sooci laba siyaabood: sidoo kale sare ee titanium, ama hooseeyo.
Related: tartanka meel gaarka ah ururiyaa xawaaraha
Laakiin helo ugu dambeeyay ee laga soo sheegay degtey ugu horeysay jilicsan on Moon ee 40 sano waa labada dhexe ee content titanium iyo hodan ku ah xabagta birta.
"Kala duwanaanshaha wuxuu inoo sheegayaa in go'iisii ​​sare Moon ee waa labis badan ka yar ee ka kooban tahay dhulka ee. Oo xiriir chemistry da'da, waxaan ka arki kartaa sida volcanism moon beddelay muddo,"Ayuu yiri Bradley Joliff of University of Washington ee St Louis, lammaanahaaga kaliya ee American ee kooxda Chinese.
isku dhafka ah ee macdanta in magma sheegayaa sheeko: in uu yahay sababtoo ah macdanta, oo dhagaxana hoy la shubay dabeecad ahaan crystallize at heerkulka kala duwan. Sidaas dhagax weyn dushiisa samatabbixiyaa sharrax inay gudaha u qoto dheer oo meeraha a.
"Titanium The qaybinta variable dushiisa Labiyo soo jeedisay in gudaha Moon ayaa ma Hda,"Ayuu yiri Professor Joliff. "Waxaan weli isku dayaysa inay ogaado siday waxan ku dhaceen."
← aragti hidde New in fahamka sirdoonka aadanaha waddo laga yaabaa in habka The ugu fiican kulan iPhone iyo iPad ah 2015 →